अडियो / भिडियो – Ketaketi Online
Category: अडियो / भिडियो
April 24, 2022 May 6, 2022 Ketaketi OnlineLeaveaComment on रामकाजी कोनेको बाल्यकाल
आदरणीय लेखक रामकाजी कोनेको रमाइलो बाल्यकाल । उहाँ मुक्तक लेखनमा स्थापित लेखक लेख्नुहुन्छ। नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्षा अग्रज लेखक काेनेको रमाइलो बाल्यकाल यस अंकमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौं । यो सामग्री दृष्टिविहीन बालबालिकाका लागि अडियो किताब कार्यक्रम अन्तर्गत कार्तिकेय ट्रस्ट नेपाल र बालसाहित्य प्रतिष्ठान नेपालको सहयोगमा तयार गरिएको हो ।
झोलाभित्र के होला ! – माधव सयपत्री (अडियाे किताब)
March 31, 2022 March 31, 2022 Ketaketi OnlineLeaveaComment on झोलाभित्र के होला ! – माधव सयपत्री (अडियाे किताब)
आज म आदरणीय लेखक माधव सयपत्रीको कथा लिएर आएकी छु । यो सन् २०२२ को अडियो किताबमा बालसाहित्य अन्तर्गत रेकर्ड भएको पहिलो बालकथा हो ।
कथाको शीर्षक : झोलाभित्र के होला !
लेखक : माधव सयपत्री
March 9, 2022 March 9, 2022 Ketaketi OnlineLeaveaComment on सृष्टि हेर्न मानिसलाई दृष्टि चाहिने भए
आदरणीय लेखक उन्नती बोहरा शिलाद्वारा लिखित यो गीत उहाँले आँखा नदेख्ने दृष्टिविहीन बालबालिकालाई समर्पण गरी रचना गर्नुभएको हो । यस गीतमा सुमधुर स्वर दिनुहुने प्रतिभाशाली युवा गायिका सरिता अर्याल र वरिष्ठ संगीतकार रमेश सुवेदी दुवै जना दृष्टिविहीन कलाकार हुनुहुन्छ । बालसाहित्य प्रतिष्ठान नेपालले तयार गरेको ‘मेरो आवाज’ नामक गीति अल्बममा यो गीत समावेश रहेको छ ।
March 5, 2022 March 5, 2022 Ketaketi OnlineLeaveaComment on पियानो बजाउँदै ६ वर्षकी बालिका सिरिन देउजा
सिरिन देउजा छ वर्षकी बालिका हुन् । उनी पियानाे बजाउन सिकिरहेकी छिन् । गुरुले सिकाउनु भएकाे कुरा ध्यान दिएर सुन्ने र अभ्यास गर्ने बानीले गर्दा सिरिनले बिस्तारै पियानाे राम्ररी बजाउन सिक्दैछिन् । उनकाे मिहिनेत देखेर उनकाे गुरु पनि खुसी हुनुभएकाे छ ।
सिरिन भन्छिन्, ‘मलाई पियानो बजाउँदा खुब मजा लाग्छ । त्यसैले म हरेक दिन स्कुलबाट घर आएपछि पियानो बजाउँछु । मैले बजाएको संगीत सुनेर ममी, डेडी, हजुरआमा, हजुरबुवा र मेरी सानी बहिनी दंग पर्नुहुन्छ । मलाई पनि खुसी लाग्छ ।’
प्रविधिका केही आविष्कारहरूले विश्वमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको भए तापनि प्रविधिको अतिरिक्तप्रयोगको कारण हुने नकारात्मक प्रभावका प्रमाणहरू पनि छन्।सूचना आदानप्रदान र प्रमुख समस्याहरू समाधान गर्न सहयोग गर्नमा प्रविधिले महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको छ। दुर्भाग्यवश, यसले तनाव, एक्लोपन, शारीरिक रोगहरू, र निद्राको कमी पनि निम्त्याउन सक्छ।
February 12, 2022 March 1, 2022 Ketaketi OnlineLeaveaComment on किशोर पहाडीको बाल्यकाल
आदरणीय लेखक किशाेर पहाडी राम्रा कथाहरु लेख्नुहुन्छ। उहाँ नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा समर्पित वरिष्ठ कवि र कथाकार हुनुहुन्छ । अग्रज लेखक पहाडीको रमाइलो बाल्यकाल यस अंकमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौं । उहाँ बाल्यकालको सम्झना सुनाउँदै भन्नुहुन्छ :
मैले पढेको पहिलो स्कूल हो- काठमाडौँको डिल्लीबजारमा अवस्थित “विजय मेमोरियल हाईस्कूल” ।
January 28, 2022 February 28, 2022 Ketaketi OnlineLeaveaComment on प्रभा भट्टराईको गजबको कविता वाचन
यो कविता लेखक भट्टराईले कार्तिकेय बालप्रतिभा पुरस्कार तथा बालसाहित्य लेखक सम्मान समारोहका अवसरमा वाचन गर्नुभएको हो । आदरणीय सत्यमोहन जोशीज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा कार्तिकेय ट्रस्ट नेपालबाट विविध विधाका बालप्रतिभाहरु र अग्रज बालसाहित्य लेखकज्यूहरुलाई पुरस्कृत र सम्मानित गरिएको थियो । कार्यक्रम कार्तिकेय ट्रस्ट नेपालका अध्यक्ष मोहन कार्कीको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो ।